Omar al-Bashir Oo Iska Difaacay Eedo Loosoo Taagay Maxkamada Khartuum Maanta. – Awdalmedia
Madaxwaynihii hore ee Sudaan Omar al-Bashir ayaa maanta mar kale loosoo taagay maxkamada Khartuun, eedeymo la xidhiidha musuq maasuq iyo heysasho lacago qalaad oo sharci darro ah.
Dacwad oogaha dalka Sudan ayaa maxkamada horkeenay eedeymo la xiriira ku tagri fal awoodeed musuq maasuq,iyo haysashada lacago malaayiin doolar ah, waxuuna dacwad ooguhu su’aalo adag ka waydiiyay madaxwaynaha lasoo eedeeyay ee Albashiir.
Omar al-Bashir ayaa iska difaacay su’aalo markii ugu horreysay lagu dhex weydiiyay maxkamadda, waxaana uu qirtay in lacag dhan 25 milyan oo doollarka Mareykanka ah ka helay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, lacagaha kalana uu ka helay meelo kala duwan oo uusan carrabaabin.
Isagoo ku dhex jira qafis bir ka sameysan ayuu al-Bashir waxa uu sheegay in lacagta uu isticmaalayay samafal balse uusan si gaar ah u isticmaalayn.
Madaxweynihii hore ee Sudan Al-Bashir ayaa ka sheegay maxkamada in lacagta lagu keenay diyaarad gaar ah si aan loo ogaan cidda soo direysa.
“Shan malyan oo dollar waxaan siiyay ciidamada sida gaarka ah u tababaran,afar malyana Jaamacad halka labo malyan oo dollarna aan ugu deeqay isbitaal.”ayuu yiri al-Bashir.
Hase yeeshee al-Bashir ayaa u sheegay inuusan hayn wax qoraal ah oo ah habka uu ku bixiyay lacagta.
“Ma dooneyn inaan ka careysiiyo dowlad aan saaxibo nahay waxana uu amiirku ii sheegay in lacagta sida aan doono aan u isticmaali karo,anigana in aan dib u celiyo lacagtaa ilama wanaagsanayn.”ayuu yiri al-Bashir. isagoo ugu denbaytii ku dooday in lacagahaasi uusan u adeegsan danahiisa gaarka ah.
Qareenka Cumar Al Bashir, ayaa dhiniciisa uu beeniyay eedaha loo soo jeediyay, isagoo dooday in dhageysiga maxkamadda labaad uu keeni doono marqaatiyaal.
Dhinaca kale garsoorihi maxkamadda ayaa qareenka u diiday n dammiin lagu sii daayo Cumar Al Bashir, waxaana dhagaysiga dacwada ayaa dib loogu dhigey illaa 7da bisha soo socota ee September.
Wasiir Boos Oo Reer Awdal ka Dalbaday Duco, Qurba-jooga-na ku Eedeyay Hurinta Colaada Ceel-afwayn.